टेलिभिजन पत्रकारिताका ‘मास्टरमाइन्ड’ अस्ताए - सगरमाथा साप्ताहिक
Published on 2019-10-170Comments
शालिन स्वभावका टेलिभिजन पत्रकारिताका ‘मास्टरमाइन्ड’ तथा पत्रकारिता जगतका धरोहर राजेन्द्र देव आचार्यको भौतिक शरीर अब हाम्रो सामु रहेन् । ६१ वर्षको अल्पायुमै उहाँको असोज १९ गते दुःखद निधन भएको छ । आज उहाँको १३ औँ पुण्य तिथी परेको छ।
उहाँको जन्म वि.सं. ३१ जेठ २०१५ मा भएको थियो। चार दशक निरन्तर पत्रकारितामा सक्रिय नेपाली पत्रकारिताको एउटा महत्वपूर्ण कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने टेलिभिजन पत्रकारिताका ‘मास्टरमाइन्ड’वरिष्ठ पत्रकार आचार्य एक अग्रज पत्रकार हुनुहुन्थ्यो ।
बुबा सत्यदेव आचार्य जयतु संस्कृतम् आन्दोलनमा हुनुहन्थ्यो । राजनीतिक चेत र स्वतन्त्रताका पक्षपाती सत्यदेवले लामो समय पत्रकारिता गर्नुभयो । बुबाकै पत्रकारिताकाे प्रभाव आचार्यमा परेकाेे थियाे। आचार्य वि.सं. २०३३ सालमा एसएलसी पास गर्नुभएकाे थियाे।
लगत्तै उहाँ नेपाली मुद्रणालय (प्रेस) मा जान थाल्नु भयो, जहाँ उहाँका बुबाको पत्रिका ‘सगरमाथा’ साप्ताहिक छापिन्थ्यो । त्यहाँ उहाँ प्रुफ हेर्नुहुथ्यो । प्रुफ हेर्दाहेर्दै समाचार लेख्न थाल्नु भयो । त्यही प्रेसबाट उमाकान्त दासको ‘नेपाली हिन्दी दैनिक’ पत्रिका प्रकाशन हुन्थ्यो । ‘स्वतन्त्र नेपाल’ प्रकाशन हुन्थ्यो । त्यसमा आचार्य प्रुफ हेर्नु र समाचार लेख्न थाल्नु भएको थियो । फाट्टफुट्ट समाचार लेख्दालेख्दै उहाँको हात समाचार लेखनमा बसिसकेको थियो। ‘सगरमाथा साप्ताहिक’, ‘नेपाली हिन्दी दैनिक’ र ‘स्वतन्त्र नेपाल’ मा उहाँले ८ वर्ष काम गर्नु भएकाे थियाे।
संयोगले त्यही बेला नेपालमा टेलिभिजन प्रशारण सुरु भएको थियो । कसरी चल्छ यो टेलिभिजन, कस्तो प्रविधि हुन्छ भन्ने जिज्ञासा आचार्यमा जागिसकेको हुनाले ‘सगरमाथा साप्ताहिक’ का लागि एउटा फिचर लेख्छु भनेर उहाँ नेपाल टेलिभिजनका प्रमुख नीर शाहलाई भेट्न सिंहदरबार पुग्नु भएको थियो। फिचर लेख्छु लेख्न जानु भएकाे उहाँ जागिर नै पाउन सफल हुनु भएकाे थियाे। र त्यहीबाट उहाँको टेलिभिजन पत्रकारिता सुरु भएको थियो।
निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तराद्र्धतिर भित्रभित्रै चर्किएको पञ्चायती विरोधी आन्दोलनताका तत्कालिन श्री ५ को सरकार रहेको बेला स्थापित नेपाल टेलिभिजनमा आबद्ध भएर उहाँले व्यावसायिक पत्रकारिताको सुरुआत गर्नुभएको थियो ।
त्यसको अलावा उहाँले आफ्नै सगरमाथा साप्ताहिक पत्रिकामा समेत समाचार लेख्नुहुन्थ्यो। जुन बेला प्रविधिको विकास भएको थिएन त्यो बेला विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै सगरमाथा साप्ताहिक पत्रिका निकालेर व्यावसायिक पत्रकारिता पूर्ण निष्ठापूर्वक गरिरहनु भएको थियो भने त्यसको साथ साथै टेलिभिजन पत्रकारिता पनि गरिराख्नु भएको थियो।
त्यसैगरी खोजमूलक, अनुसन्धानमुलक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशनसंगै २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको खुल्ला वातावरणको उपयोग गर्दै आफ्नो साप्ताहिक पत्रिका अझ उचाइमा पुर्याउनु भएको थियो। भने टेलिभिजन पत्रकारिताका ‘मास्टरमाइन्ड’ को रुपमा पनि चिनिन थाल्नु भएको थियो।
उहाँ नेपाल टेलिभिजनको साथ साथै आफ्नो साप्ताहिक पत्रिकालाई निरन्तरता दिनु भएको थियो। नेपाल टेलिभिजनमा उहाँ ३२ बर्षसम्म काम गर्नु भएको थियो। उहाँ नेपाल टेलिभिजनको नायब महाप्रबन्धको पदसम्म पुगेर अवकाश पाउनु भएको थियो। व्यावसायिक पत्रकारिताको यात्राको क्रममा उहाँ एकपछि अर्को महत्वपूर्ण संस्थासँग जोडिदै जानु भएकाे थियाे।
आचार्य पत्रकारिताका गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो। कान्तिपुर सिटी कलेज (पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय)मा सिधै पत्रकारितामा मास्टर्स पढाउन थाल्नु भएका उहाँ दुई वर्ष त्यहाँ प्रध्यापन गराउनु भएको थियो।
पढाएको दुई वर्ष भएपछि उहाँ पत्रकारितामा एमए गर्न अमेरिका जानु भएको थियो । त्यसपछि प्रशारण र प्रिन्ट पत्रकारितामा मास्टर्स गरेर नेपाल फर्किनु भयो । ०६४ बाट उहाँले रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पत्रकारिता पढाउन थाल्नु भयो।
पछिल्लो समय एक दशक भन्दा बढी समयदेखि उहाँ रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा प्रध्यापन गराउँदै आउनु भएको थियो। भने केही महिनादेखि उहाँ न्युज २४ टेलिभिजनमा न्युज चिफको रुपमा काम गर्दै आउनु भएको थियो।
पत्रकारिताको मुल मर्मबाट विचलित नभई निर्भिक ढंगले कलम चलाउनु भएका उहाँले जीवनको उर्भर समय पत्रकारिताकै निम्ति खर्च गर्नु भएको थियो । चुनौतीको सामना नगरी अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने मान्यता राख्दै अगाडि बढनु भएका आचार्यले अविचलित रुपमा आफ्नो पत्रकारिताको यात्रालाई निरन्तरत रुपमा अगाडि बढाउन सफल हुनुभएको थियो । टेलिभिजन पत्रकारिताकै इतिहासमा स्वर्गीय आचार्यले एउटा मानक स्थापित गर्नुभएको थियो ।
चार दशकको पत्रकारिताको यात्रामा आचार्यको पत्रकारिता सन्तुलित, सार्वजनिक हितप्रति प्रतिबद्ध रहेको थियो । दलीय घेराभित्र बसेर पत्रकारिता गरेर अघि बढ्न दलकै संरक्षण खोज्ने पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगतिबाट उहाँ सर्वथामुक्त हुनुहुन्थ्यो ।
समाजमा रहेका विकृति र विसंगती हटाउदै समृद्ध देश निर्माण गर्ने उहाँको पत्रकारिताको मुख्य ध्येय रहेको थियो । प्रविधिको विकाससँगै उहाँले साप्ताहिक पत्रिकालाई अनलाईन पत्रिकामा रुपान्तरण गर्नुभएको सगरमाथा साप्ताहिक डटकम व्यवसायिक पत्रकारिता गर्नेहरुको लागि कोशेढुंगा सावित भएको छ। लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा अगाडि बढन नयाँ पुस्तालाई आचार्य सदैव उत्प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्थ्यो । व्यवसायिक पत्रकारिताको जग हाल्नु भएका उहाँले निरन्तर रुपमा जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि पत्रकारिताको माध्यमबाट खबरदारी गरिरहनुभएको थियो ।
व्यवसायिक पत्रकारितालाई स्थापित गर्न सफल हुनुभएका उहाँले कठिन परिस्थिलाई पनि सामना गरेर पत्रकारिता पेशालाई अगाडि बढाउन विशिष्ट क्षमता राख्नुभएको थियो । आचार्यको निधनसँगै देशले पत्रकारिता क्षेत्रको एक योग्य, अनुभवी, व्यावसायिक र सक्रिय पत्रकारलाई गुमाएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रले परिपक्क र असल अभिभावक गुमाएको छ ।
उहाँको निधनले सिंगो पत्रकारिताको धरोहर ढलेको छ । चिकित्सकको लाखौं कोशिसका बाबजुद आचार्यलाई बचाउन सकिएन । अभिभावक गुमाएको दुःखद घडीमा सगरमाथा साप्ताहिक स्तब्ध र मर्माहत भएको छ।
उहाँले टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्रमा पु-याउनु भएको योगदानको नेपाली पत्रकारिता जगतले सदा स्मरण गरिरहनेछ। सधैं न्याय, समानता र सकारात्मक सोचका निम्ति लड्न सिकाउने आचार्यले देखाउनु भएको बाटो व्यवसायिक पत्रकारकालागि प्रेरणाको स्रोतको रुपमा लिने गरिएको छ । प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक आचार्यप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली ।